काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण तीव्र – RemitKhabar
काठमाडौं : लकडाउन अन्त्यसँगै काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र देखिएको छ। मंगलबार मात्रै १ सय ३४ संक्रमित थपिएका छन्। आरटी पीसीआर परीक्षण गरेकामध्ये काठमाडौंमा १ सय १०, ललितपुरमा १६ र भक्तपुरमा ८ जनामा पोजिटिभ देखिएको हो।
‘औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरले सहयोग मात्र गर्ने हो। रोगको उपचार नहुने भएकोले रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो’, प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘संक्रमण बढ्दै गए अस्पतालले धान्न सक्दैनन्। स्वास्थ्यकर्मी पनि अपुग हुन सक्छन्। अकालमा ज्यान जान सक्छ। बेलैमा सावधानी अपनाए हुन्थ्यो।’
सरकारले साउन ७ गतेदेखि यातायात सेवामा जोरबिजोर प्रणाली हटाएको थियो। सार्वजनिक सवारी साधनमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरिएको छैन। व्यापार, बैठक, भेटघाट भन्दै काठमाडौं आउनेहरूबाट संक्रमण फैलन पुगेको महाशाखा प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘सीमावर्ती जिल्लाबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण बढी पाइएको छ।’
लकडाउन अवधिमा पनि पहुँचका भरमा पास बनाएर निजी र सार्वजनिक सवारी साधनबाट काठमाडौं भित्रिनेका कारण पनि संक्रमण बढेको हो। कतिपय एम्बुलेन्सबाट पनि आएका थिए। मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार काठमाडौं भित्रिने नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर परीक्षण नगर्दा उपत्यका जोखिममा परेको हो। ‘होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कोरोना पोजिटिभ देखिएकालाई अस्पतालको आइसोलेसन र नेगेटिभ देखिएका व्यक्तिलाई कोठामा जान दिने व्यवस्था गरेको भए यो जोखिम हुने थिएन’, उनले भने। काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख प्रवेशद्वार नागढुंगा, साँगा, फर्पिङ नाकाबाट ठूलो संख्यामा यात्रुहरू प्रवेश गरिरहेका छन्।
७२ प्रतिशतले मात्रै लाउँछन् मास्क
नेपालमा ७२.१ प्रतिशतले मात्र मास्क प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। २७.१ प्रतिशतले मास्क नलगाएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययनमा उल्लेख छ। परिषद्ले व्यक्तिगत रूपमा ४ हजार ५ सय २ जनामा अध्ययन गरेको थियो। यसैगरी सार्वजनिक स्थलमा २ हजार ७ सय ३ जनामा अध्ययन गर्दा २७.३४ प्रतिशतले मास्क सही तरिकाले नलगाएको पाइएको छ। उनीहरूले चिउँडोमा राख्ने, हातमा लिने वा मुख मात्र छोप्ने गरी लगाएको पाइएको हो।
परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा बाहिर हिँडडुल गर्दा पनि मास्क नलगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। मास्क लगाए पनि सही तरिकाले नलगाउने गर्दा जोखिम झन् बढेको छ।’
संक्रमण बढी देखिएका जिल्लामा जोखिम रहेकाले अलि कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको सञ्चार तथा सूचनामन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। उनका अनुसार कडाइ गर्ने अधिकार स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ। ‘जोखिम जहाँ बढ्छ। त्यहाँ कडाइका उपाय अपनाइन्छ’, मन्त्री खतिवडाले भने। मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘जोखिम घट्दै गएको स्थानमा खुकुलो हुँदै जाने र जोखिम बढेको ठाउँमा कडाइ बढ्दै जाने क्षेत्रगत नीति हो।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा हरेक तहतप्काका व्यक्तिको उत्तिकै जिम्मेवारी भएको बताए।